Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha K/Galbeed oo Baydhabo ku daah-furay Qorshaha Horumarinta Qaranka ee…
Wasiirka Warfaafinta oo Daah-furay heerka sare ee deeq-bixiyeyaasha ee taageeridda…
Ciidanka PSF ee Puntland oo Howlgal ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyey Buuraha Cal…
Fahad Yaasiin oo Nairobi ku sugan, maxay tahay Sababtu,?
Madaxweyne Farmaajo oo ugu Baaqay Madaxda Afrika in ay Qaataan Siyaasado Waxtar u leh…
Wararka naga soo garaya degmada Dharkeenley ee Gobolkan Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in halka loo yaqaano Ajabka shidaalka ee degmadaas uu ka dhacay qarax Gaari.
Qaraxaan ayaa dadka deegaanka waxa ay sheegeen in uu ahaa mid gaarigiisa loogu xiray Sarkaal ka tirsan Ciidamada Booliiska soomaaliya balse uu ka badbaaday sida uu dalsan u sheegay qof ka mid ah dadka deegaanka ah.
“Goobta anaga oo joogna ayaa qarax maqalnay markii aan imaanay,waxaan aragnay gaariga oo burbursan ninkii watay wuu ka dega majirto cid wax ku noqotay xaaladuna iminka waa mid caadi ah ah ayuu yiri goobjoogaha.
Wararka kale oo ay HornAfrik heleyso ayaa waxa ay sheegayaan in Sarkaalka markii uu Gariga ka degay uu ku wareejiyay mid ka mid ah Caruurta Gawaarida Dhaqa si loogu hagaajiyo intas kaibna uu qaraxa dhacay.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa Goobta gaaray mana jirto cid loo qabtay qaraxaas,xaaladuna iminka ay tahay mid sideedii hore ku soo laabatay.
Dowladda oo Is Hortaag ku samaysay Kulan ay Xildhibaano ku yeelan lahaayeen SYL Hotel
reporter	 Feb 14, 2019 0
Danjiraheenna Suudaan oo la kulmay dhiggiisa Dalka Tuniisiya ee…
Madaxweyne Farmaajo oo soo xiray Shir Sanadeedka Garsoorka Soomaaliya